Filtrer les éléments par date : lundi, 22 novembre 2021
lundi, 22 novembre 2021 20:33
Hay moa fotodrafitrasan'ny ministeran'ny fiarovana ny kianja monisipaly Mahamasina na Kianja Barea
Ny tsininy kely, tsy hita any amin'ny tetibolan'ny MDN, défense nationale, na any amin'ny tetibolam-panjakana 2019 mihitsy ity 285 miliara ar (77 millions de dollar) hanamboarana azy ity. Tsy re tsaika ihany koa ny appel d'offre tamin'izy ity.
Tandremo ihany ry PRMP fa dia fonosy blindé tsara ny hatoka rahatrizay, sao tratra farany eo. Ireo mpihogahoga iala ilany aby.
Tafandria mandry aby e.
Publié dans Pilo kely
lundi, 22 novembre 2021 20:32
Fonjan’i Miandrivazo : Gadra 22 no voamarina fa tafavoaka
Araka ny tatitra ofisialy navoakan’ny ministeran’ny Fitsarana androany 22 novambra 2021, dia niisa 22 ireo gadra voamarina fa tafavoaka tao amin’ny fonjan’i Miandrivazo Faritra Menabe, raha toa ka 32 no voalaza roa herinandro lasa izay.
Voafonja efa voatsara ny 9 amin’ireo nandositra ireo. Tsy mbola voatsara ny 6. Olona 7 hafa no tafiditra anatin’ireo tsy hita (absent).
Tatitra voarain’ny minisitera ny 11 novambra 2021 ireo, taorian’ny fanadihadiana maromaro, ny fijerena ny boky sy ny voafonja rehetra.
Nohamafisin’ny minisitry ny Fitsarana IMBIKY Herilaza fa tsy vaky ny Fonjaben’i Miandrivazo tamin’ny fivoahan’ireo voafonja ireo. Noho izany, mitohy ny fanadihadiana hamantarana ny tomponantoka tamin’ity famoahana voafonja ity.
lundi, 22 novembre 2021 07:34
COMESA : Ny Filoha Egyptiana Abdel Fattah Al-Sissi indray no handray ny fitantanana
Tanterahina any Le Caire Egypta ny Fivoriana an-tampony faha-21 an'ireo Filoham-pirenena sy filoham-panjakana mikambana ao anatin'ny Vondrom-pifanakalozana ara-barotra COMESA (The Common Market for Eastern and Southern Africa).
Hanamarika ity fivoriam-ben'ny COMESA, izay hatao rahampitso 23 novambra, ity ny hanatanterahana ny fifamindram-pitantanana eo amin'ny Filoha Andry Rajoelina, mitarika ny delegasiaona Malagasy any an-toerana, izay filoha amperinasan'ny Fivorian'ireo Filoham-pirenena sy Filoham-panjakana ao anatin'ny COMESA, sy ny Filoha Egyptiana Abdel Fattah Al-Sissi, izay handimby azy.
Madagasikara moa no niandraikitra izay fitantanana izay, nanomboka ny taona 2018, raha mbola Hery Rajaonarimampianina no filoham-pirenena, dia nandimby toerana azy ny filoha ankehitriny, satria ny Firenena no misolo tena amin'ny fitantanana.
Ny fanamafisana ny fahafahana miarina amin'ny alalan'ny fampiasana ny fisokafana ara-ekonomika sy ny fampiasana ny nomerika sy stratejika moa no lohahevitra hodinihana mandritra ity fihaonana an-tampony faha-21 ity.
lundi, 22 novembre 2021 07:28
Fahasalamam-bahoaka : Nankaiza ny vaksinin-jaza BCG sy Polio
Efa herinandro maromaro izao no tsy ahitana vaksinin-jaza BCG sy Polio atete am-bava eny amin’ireo toeram-pitsaboana miankina amin’ny fanjakana.
Maro amin’ireo zaza vao teraka no tsy mbola nisitraka vaksiny.
Tonga eny amin’ny CSB sy « Maternité » mitondra ny zanany ireo reny, saingy miverim-potsiny ary tsy nampahafantarina mazava izay fotoana ahatongavan’ireo vaksiny ireo.
Manahy ny amin’ny ho fahasalam-janany ireo ray aman-dreny manoloana izany tsy fisiana vaksiny sy ny fitarazohan’ny famatsiana izany, ny toetr’andro rahateo efa miovaova ka mamparefo ny fahasalamana, ary tato ho ato dia tsikaritra fa betsaka ireo zaza tratry ny tsy fahasalamana entina manantona ireny hopitalin’ny Reny sy ny zaza ireny.
lundi, 22 novembre 2021 07:23
Kianja Barea : Tsy voaloa vola ilay orinasa sinoa nanamboatra azy
Miparitaka eny amin’ny tambazotran-tserasera Meta, na facebook teo aloha, ny fampahafantarana an-tsoratra nataon’ny orinasa sinoa China Construction Overseas Development Madagascar SARL (CSCOD), fa misy ampaham-bola mitentina 17.321.614,90 dolara tsy mbola voarainy avy amin’ny mpanakarama azy nanamboarana ny Kianja Barea Mahamasina, ka tsy ahafahany manefa ny volan’ireo mpamatsy entana azy, na teo aza ny taratasy in-droa miantoana fampahatsiahivana nataon’ity orinasa ity.
Vokany, tapaka ny fandefasana ireo jiro manazava ny kianja, toy izany koa ny fitsirihana (surveillance) ary ny komandy mandefa ny « écran géant ».
Famatsiam-bola madiodion’ny fanjakana maherin’ny 77 tapitisa dolara no nenti-nanana ny fanamboarana ny Kianja Barea Mahamasina.
Etsy ankilany ny mpitondra fanjakana dia mamerimberina hatrany manoloana ny fitakiana miseholany etsy sy eroa fa manambola ny fanjakana, ka raha tsy « fake » ity taratasy ity dia mampametra-panontaniana ihany nahoana no tonga amin’izao tsikafona izao.
lundi, 22 novembre 2021 07:22
Kitra malagasy : Tsy ialan-dromoromo
Mandalo fotoan-tsarotra ny baolina kitra malagasy. Ifandroritana ary tsy ialan-dromoromo ny fitantanana ny Federasiona, ratsy ny vokatra eny an-kianja, vokany tsy mitsaha-mihemotra ny laharan’ny ekipam-pirenena malagasy ny baolina kitra na Barea manerantany.
Faha-101 i Madagasikara tamin’ny fandaharana farany navoakan’ny FIFA.